Iwu Ohm: Ihe niile Need Kwesịrị Knowma Akọwaara Ha Azọ Dị Mfe | Akụrụngwa n'efu
Ọ bụrụ na ị na-amalite ụwa nke ọkụ eletrik na eletrọniki, n'ezie ị nụla ihe ama ama otu puku ugboro Iwu Ohm. Ma ọ bụghị maka obere, ebe ọ bụ iwu bụ isi na mpaghara a. Ọ dịghị mgbagwoju anya ma ọlị, a na-amụtakarị ya na mbido n'ihi etu o si dị mkpa, n'agbanyeghị nke ahụ, a ka nwere ụfọdụ ndị mbido na-amaghị ya.
N'ime ntuziaka a, ị ga mụta ihe niile ị chọrọ banyere Iwu Ohm a, site na ihe ọ bụ, na usoro dị iche iche ị ga-esi muta, otu esi eji ya Ihe eji eme, wdg. Na iji mee ka ihe dịkwuo mfe, m ga-eme nyocha dị omimi n'etiti usoro eletriki na mmiri ma ọ bụ usoro hydraulic ...
1 Tụnyere usoro hydraulic
2 Gini bu Iwu Ohm?
2.1 Ngwa nke Iwu Ohm
Tụnyere usoro hydraulic
Tupu ịmalite m ga-achọ ka ị nwee echiche doro anya banyere otu usoro eletriki si arụ ọrụ. O nwere ike iyi ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ ihe karịa usoro ndị ọzọ, dị ka hydraulic ebe ị nwere mmiri mmiri na-asọ site na tubes dị iche iche. Ma gịnị ma ọ bụrụ na i mere a mmegharị ahụ ma were ya na elektrọn nke eletrik bụ mmiri? Ma eleghị anya, ọ ga-enyere gị aka ịghọta na a ngwa ngwa na isi ụzọ otú ihe n'ezie na-arụ ọrụ.
Maka nke a, aga m eme ihe atụ n'etiti otu eletriki na otu hydraulic usoro. Ọ bụrụ n ’ịmalite iji anya nke uche hụ ya otu a, ọ ga - enwe nghọta karịa:
Onye nduzi: were ya na ọ bụ mmiri tube ma ọ bụ sooks.
Na-egbochi ihe: Can nwere ike iche maka mmewere nke na - egbochi mmiri mmiri.
Eletrik: ọ bụ ihe ọ bụla karịa nrugharị nke electrons na-agafe onye na-eduzi ya, yabụ ị nwere ike iche ya dị ka mmiri mmiri na-agafe na tube.
Voltaji: maka volta na-agagharị na sekit ga-enwe ihe dị iche n'etiti isi abụọ, ọ dị ka achọrọ ka ọdịiche dị na ọkwa n'etiti isi abụọ n'etiti nke ịchọrọ ka mmiri gafere. Nke ahụ bụ, ị nwere ike iche n'echiche voltaji dịka nrụgide nke mmiri na ọkpọkọ.
Nguzogide: Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ iguzogide ịgafe eletrik, ya bụ, ihe na-emegide ya. Were ya na ị na-etinye mkpịsị aka gị na njedebe nke eriri mmiri n'ubi gị ... nke ahụ ga-eme ka o siere jet ike ịpụta ma mee ka nrụgide mmiri (voltaji).
Ike: ike ma ọ bụ ugbu a nke na-agafere na eletrik eletrik nwere ike ịdị ka oke mmiri na-agafe na tube. Dịka ọmụmaatụ, chee na otu tube bụ 1 ″ (obere ike) na tube 2 ″ (ike dị elu) jupụtara na mmiri a.
Nke a nwekwara ike iduga gị iche na ị nwere ike iji ihe eletriki ya na hydraulics:
A cell, batrị, ma ọ bụ ike ọkọnọ: O nwere ike ịdị ka isi iyi mmiri.
Condenser: enwere ike ịghọta dika mmiri mmiri.
Transistor, agba anọ, gbanye ...- Enwere ike ịghọta ngwaọrụ ndị a dị ka mgbata na ị nwere ike gbanye ma gbanyụọ.
Nguzogide- O nwere ike ịbụ nguzogide ị na-etinye mgbe ịpịrị mkpịsị aka gị na njedebe nke eriri mmiri, ụfọdụ ndị na-ahụ maka ogige / nozzles, wdg.
N'ezie, ị nwekwara ike ịtụgharị uche n'ihe ekwuru na ngalaba a iji nweta nkwubi okwu ndi ozo. Iji maa atụ:
Ọ bụrụ na ị mụbaa ngalaba nke ọkpọkọ (ike) nkwụsi ike ga-ebelata (lee Iwu Ohm -> I = V / R).
Ọ bụrụ na ị mụbaa nguzogide na ọkpọkọ (nguzogide), mmiri ahụ na-apụta na nrụgide dị elu n'otu ọsọ ahụ (lee Iwu Ohm -> V = IR).
Ma ọ bụrụ na ị mụbaa mmụba mmiri (ike) ma ọ bụ nrụgide (voltaji) ma tụọkwa jet ahụ n'ebe ị nọ, ọ ga-emebi karịa (ọkụ eletrik dị egwu karị).
Enwere m olileanya na site na iji ihe ndị a ị ghọtara ihe ka mma ...
Gini bu Iwu Ohm?
La Iwu Ohm Ọ bụ njikọ dị n'etiti nnukwu ịdị mkpa atọ bụ ike nke ugbu a, esemokwu ma ọ bụ voltaji, na nguzogide ahụ. Ihe dị mkpa iji ghọta ụkpụrụ ọrụ nke sekit.
Akpọrọ ya aha onye nyocha ya, onye German physic George Ohm. O nwere ike ileba anya na na okpomọkụ na-agbanwe agbanwe, ọkụ eletrik na-agafe na nkwụsi ike dị larịị dabara na voltaji etinyere ya na nke dabara adaba na nguzogide ahụ. Nke ahụ bụ, M = V / R.
Ndị atọ ebube nke usoro enwere ike idozi ha iji gbakọọ voltaji megide ụkpụrụ nke ugbu a na nguzogide, ma ọ bụ nguzogide dịka ọrụ nke voltaji enyere na nke ugbu a. Bụ:
V = ỌR
R = V / M
N'ịbụ m ugbu ike nke sekit gosipụtara na amperes, V voltaji ma ọ bụ voltaji gosipụtara na volts, na R na-eguzogide gosipụtara ohms.
por na-arụ ọrụWere ya na ị nwere oriọna nke na-erepịa 3A ma na-arụ ọrụ na 20v. Iji gbakọọ nkwụsi ike ị nwere ike itinye:
Dị mfe, nri?
Ngwa nke Iwu Ohm
na Iwu Ohm A na-akparaghị ókè, na-enwe ike itinye ha n'ọrụ n'ọtụtụ ngụkọta oge na nsogbu ngụkọta iji nweta ụfọdụ n'ime ogo atọ ọ metụtara na sekit. Ọbụna mgbe sekit dị mgbagwoju anya, enwere ike ịme ka ọ dị mfe iji tinye iwu a ...
I kwesiri ịmara na ha dị ọnọdụ abụọ pụrụ iche n'ime Iwu Ohm mgbe ị na-ekwu maka sekit, ndị a bụ:
Obere oge: na nke a ọ bụ mgbe egwu abụọ ma ọ bụ akụrụngwa nke sekit ahụ na-akpọtụrụ, dịka mgbe enwere mmewere na-eme kọntaktị n'etiti ndị nduzi abụọ. Nke ahụ na - ebute mmetụta dị egwu ebe ụda ugbu a dị ka voltage na njedebe na - ere ọkụ ma ọ bụ na - emebi emebi.
Meghee circuit: bụ mgbe etinyere sekit, ma ọ bụ jiri ụma na-eji ihe ntụgharị, ma ọ bụ n'ihi na egbutula ụfọdụ onye nduzi. N'okwu a, ọ bụrụ na elere sekit ahụ anya site na Iwu Ohm, enwere ike ikwenye na enwere nguzogide na-enweghị ngwụcha, yabụ na ọ gaghị enwe ike iduzi ugbu a. N'okwu a, ọ bụghị mbibi na ihe ndị dị na sekit, mana ọ gaghị arụ ọrụ maka oge nke sekit na-emeghe.
Agbanyeghị na iwu Ohm bụ isi etinyeghị oke nke ike eletrik, enwere ike iji ntọala maka ngụkọta ya na sekit eletriki. Ma ọ bụ na ike eletrik na-adabere na voltaji na ike (P = I · V), ihe Iwu Ohm n'onwe ya nwere ike inyere aka gbakọọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » mmụta » Iwu Ohm: ihe niile ị chọrọ ịma